Dowladda Soomaaliya waxay nasiib darro ku tilmaamtay in qaar ka mid waftigii dowladda lagu xanibay garoonka Jomo Kenyatta Sabtidii.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay aad uga niyad jabsan tahay dhacdadii Sabtidii tagtay garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi ku qabsatay wafti ka tirsan dowladda Soomaaliya, oo halkaas ku hakanayey, ayaga oo kusii jeeday magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Dowladda Soomaaliya waxay nasiib darro ku tilmaamtay in qaar ka mid waftigii dowladda, oo ay ku jiraan afar xildhibaan lagu celiyey garoonka, taasi oo dib u dhac ku keentay safarkooda.
Warxafaadeeed kasoo baxay xafiiska ra’iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in ra’iisul iyo waftigiisa wasiirada aysan qeyb ka ahay dadka la celiyey, islamarkaana si heeer sare loogu soo dhoweeyey qeybta VIP-da, hase yeeshee ra’iisul wasaaruhu go’aansaday inuu safarkiisa dib u dhigosababo la xiriira xildhibaanada la xanibay.
Dowladda waxa kale oo ay sheegtay in heshiiska kala dhaxeeya Kenya uu yahay in diyaradaha sida madaxda dowladda aysan ku hakan magaalada Nairobi, si la mid ah kuwa shacabka, islamarkaana waftiga dowladda ay haysteen fasax ah inay ku hakadaan Nairobi.
Ayada oo la eegayo heshiiskan, ayey tiri dowladda, xildhibaanada waxay Visa qaadan karaan marka ay yimaadaan garoonka, sidaa darteedna ma ahayn in la xanibo.
Dowladdu waxa ay sheegtay inay cudur daar buuxa iyo sharaxaad ka fileyso dowladda Kenya inay ka bixiso sababta ay arrinta u dhacday.
Dawladda Kneya weli si rasmi ah uga hadlin dhacadadan, hase yeeshee sarkaal ka tirsan Garoonka Diyaaradaha ee Jomo Kneyatta ayaa warbaahinta waddankaasi u sheegay in dhacdadani ay la xiriirtay “ku xadgudub borotokool” sida uu hadaka u dhigay.
Wareysi: Abwaan Saciid Saalax Axmed
Wareysi: Aleskandar Shockof (Yuusuf Caana Geel)